Mpanamboatra satroka siny - Orinasa mpamokatra sy mpamatsy China Bucket Hats
Caps Sports any ivelany
Fanjonoana mangatsiaka sy Hikin ...
Trano an-trano alohan'ny ririnina miaraka amin'ny ...
Camo azo ovaina ho an'ny lehilahy ...
Saron-doha baseball zazalahy zazalahy kely
Saron-tava miaro amin'ny masoandro miaro amin'ny zaridaina rehefa mandeha an-tongotra
Fiarovana amin'ny masoandro lavorary: ity flable flap mandrakotra masoandro satroka vita amin'ny lamba miaro ny masoandro UPF 50+ UV izay manakana ny 98% amin'ny taratra UV manimba. NY Mpiaro satroka masoandro hiaro ny tavanao sy ny hatoka ary ny sofinao amin'ny taratry ny masoandro manimba
Maivana sy azo alaina: vita amin'ny polyester tsara izay maivana, azo aforitra ary tsy tantera-drano; sisin'ny harato miaina tsara kokoa noho ny fikorianan'ny rivotra tsara kokoa izay mahatonga ny lohanao hijanona milamina amin'ny andro mafana
Topim-bazaha an-doha amin'ny loha ivelany miafina mesh sun satroka ho an'ny vehivavy vehivavy
FOMBA FIASA DUAL: Ny satroka masoandro mesh miafina manasongadina efamira mesh miafina miafina eo an-tampony izay manafina mpiambina moka feno loha. Sintony fotsiny izy dia ahamboaro ny haben'ny lohanao ary vonona tanteraka ianao hanana hetsika ivelany tsy misy moka, lalitra, bibikely ary bibikely. Satroka fanoherana ny moka na masoandro
Fantsom-pahavaratra sy fiarovana an-tongotra mandritra ny fahavaratra
Fanokafana ny harato ahazoana aina sy azo alaina: Tsy misy mahatsikaiky rehefa mahatsapa zavatra be loatra ny zava-drehetra. Ka 'nifaly' an'ity izahay vanin-taona mafana satroka fitsangatsangana an-dranomasina fiarovana miakatra ianao ka miaina tsara. Ity variana amin'ny fisaronan'ny tarehy + vozona ity dia misy rivotra manidina mamela ny hafanana handositra & hisorohana azy tsy hidona-poana. Vitao ny zavatra vita amin'ity combo mahery ity.
Adventures tsy misy hatsembohana: Mafy ny hatsembohanao? Aza manahy! Namboarina tamin'ny fampiasana nylon premium, ity maivana ityvanin-taona mafana satroka fitsangatsangana an-dranomasina fiarovana mifoka sy mitsoka haingana ny hatsembohana noho ny satroka vita amin'ny landihazo. Maina vetivety koa izy io mba hahafahanao mampiasa azy rehefa mila izany ianao. Mpanaradia tonga lafatra ho an'ny vatanao any ivelany manaraka.
Sora marika marika manokana momba ny lamaody ho an'ny mpanjono
1.Ny fitaovana, ny loko, ny fomba ary ny famaritana ny siny siny dia azo atao arakaraka ny zavatra takinao. 2. Series an'ny satroka: satroka siny, satroka fanatanjahan-tena eny ivelany, satroka dokambarotra, satroka baseball, satroka miaramila, satroka masika, satrok'akanjo, satroka ririnina, satroka sifotra camouflage, satrasana fanasana, satron'ny mpanjono sns. amin'ny fanontanianao farany indrindra ao anatin'ny 12 ora. 4. Azo antoka miaraka amin'ny kalitao azo antoka sy serivisy aorian'ny fivarotana, ho faly ianao mahita fa ny manafatra mivantana avy aminay dia tena mora sy tsotra rehefa mividy amin'ireo mpamatsy eo an-toerana nefa misy vidiny mirary sy safidy maro hafa.